I-P25A a Home ekude neKhaya - I-Airbnb
I-P25A a Home ekude neKhaya
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguProbal
Molo Ndwendwe Lwam Othandekayo, Kuyavuyisa ukukwamkela kwikhaya lakho lesibini elikude nekhaya. Ndikunika iflethi okanye indlu ekwicomplex ekhuselekileyo equka igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokutyela kunye nendlu yangasese ecocekileyo. Le ndawo isembindini welifa lemveli iNorth Kolkata idibene kakhulu nazo zonke iindawo zesixeko. Isikhululo se-metro esikufutshane yi-Sovabazar imizuzu eyi-10 ukusuka kwaye Isikhululo Seenqwelo-moya sikwiikhilomitha eziyi-10. Isikhululo saseKolkata imizuzu eyi-15, isikhululo seSealdah imizuzu eyi-20 kunye nesikhululo iHowrah kwimizuzu eyi-30 ukusuka kwindlu yam.
Indawo enkulu eNorth Kolkata ejikelezwe ziindawo zeHeritage ezikwiikhilomitha eziyi-5. Ukufumaneka lula kwezithuthi zikawonke-wonke ezifana ne-Metro, ibhasi, ii-tram, iteksi, inkonzo yesikhephe kwi-Howrah Rail Station kunye ne-3 wheeler autos. Indawo ekufutshane yokumisa ibhasi/i-tram kunye nomzila ozenzekelayo yimizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo ukusuka endlwini yethu.
Yindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo. Isikhululo samapolisa esikufutshane sikwisitrato esifanayo kwaye kuthatha imizuzu eyi-2 ukusuka endlwini yethu. Iimarike, iivenkile, iivenkile zokutyela zikumgama okufuphi ngeenyawo
Umbuki zindwendwe ngu- Probal
Mna nomfazi wam siza kufumaneka ukuze sincede ngalo lonke ixesha lokuhlala kwabo.